နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အိတ် Dusting(24 များအတွက်စုစုပေါင်း အိတ် Dusting ထုတ်ကုန်များ)
အိတ် Dusting - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ အိတ် Dusting ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား အိတ် Dusting / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် အိတ် Dusting များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
tag ကို: PPS စစ်ထုတ်အိတ် , ဘွိုင်လာဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , ဘိလပ်မြေဖုန်စစ်အိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ တရုတ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည် PPS...
ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်ငွေ့အပူစွမ်းအင်စက်ရုံမှဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းစနစ်အတွက် PPS အထည်စစ်ထုတ်အိတ်များ
tag ကို: ခုခံနိုင်သော Air Filter Bag , စက်မှုအိတ်လေထုစစ်ထုတ်စက် , ကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်းသောဘွိုင်လာ Filter Bag
Prodcut ဖော်ပြချက် ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်ငွေ့အပူစွမ်းအင်စက်ရုံမှဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းစနစ်အတွက် PPS အထည်စစ်ထုတ်အိတ်များ...
tag ကို: ရေတွန်းလှည်းနှင့်ရေတွန်းလှည်းအိတ် , အက်ဆစ်ဒဏ်ခံ PPS အိတ်စစ်ထုတ်အိတ် , ဖိုင်ဘာဖန်စစ်ထုတ်အိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့်အိတ်ကိုအထည်အလိပ်အ ၀ တ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ wowen မဟုတ်သည့်ခံစားမှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဖုန်ထည်၏စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အသုံးပြု၍ ဖုန်မှုန့်များပါ ၀...
မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်စက်အိတ်
tag ကို: ဘိလပ်မြေ Polyester filter ကိုအိတ် , အပူခံနိုင်သော PTFE ဖုန်အိတ် , Polypropylene ဖုန်ကောက်ခံရေးဘိလပ်မြေအိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်စက်အိတ်
၈ ကြိမ်မြောက်ဘ ၀ ၀.၂၂ မိုက်ခရွန်စီစစ်ထားသောအိတ်များကိုရေတိုင်ကီထဲတွင်ထည့်ထားသည်
tag ကို: အပူကိုခံနိုင်သည့် Nonwoven Filter Bag , ရက်ကန်းသားရေအပ်မ ၀ င်သည့်အပ်အိတ်စစ်စစ်အိတ် , ဖုန်စစ်ထုတ်အိတ်ဘိလပ်မြေမီးဖိုဖုန်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များ 1. အထူးအခြေစိုက်စခန်းထည်နှင့်အမျှင်, ပုံစံနှင့် calendered ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ 2, ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ချောမွေ့သည် ၃၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်းနှင့်ရေစိမ့်ဝင်ခြင်း 4, ထုတ်ကုန်တူညီခြင်းကောင်းလှ၏ 5....
PPS + PTFE ပေါင်းစပ်မြင့်မားသောအပူချိန်စစ်ထုတ်အိတ်
tag ကို: Polytetrafluoroethylene Silo Deduster , P84 အပ်အ ၀ င်အိတ်စစ် filter အိတ် , Pps Polyester Paste ဖုန်အိတ်
အင်္ဂါရပ် 1Good အပူခုခံခြင်းနှင့် 280 ℃အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးနိုင်တယ်။2ဖုန်မှုန့်လွယ်ကူခြင်း။ 3Good ချေးခြင်း၊...
tag ကို: ဘိလပ်မြေမီးဖို၏ဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , Polyester လေထုဖုန်စစ်ထုတ်အိတ်ဘိလပ်မြေ , ရက်မဟုတ်သောအထည်အလိပ် Dacron စစ်ထုတ်အိတ်
ဖန်မျှင်အမျှင်မျှင်ဖုန်မှုန့်အိတ် ဖန်မျှင်ဖိုက်ဘာဖူဂျင့်ကိုအလတ်စားနှင့်အယ်လ်ကာလီအခမဲ့ဖန်မျှင်အမျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ ၎င်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာစစ်ထုတ်ပစ္စည်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ ရက်ကန်းချည်တိုးချဲ့ပြီးနောက်ချည်သည်ယက်သည်။ အမွှာ၊ ဖဲ၊ အမြွှာ၊...
အရည်အသွေးမြင့်မားသော Polyester / PE ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန်စစ်ထုတ်အိတ်:
tag ကို: ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ် , အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအရည်ကျိုမီးဖိုအိတ် , ဆေးထိုးအပ်အ ၀ တ်အထည်အိတ်
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက် ဖန်မျှင်ဖိုင်ဘာစစ်ထုတ်ပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေနှင့်ရေနံတွန်းလှန်သော flumes filter အိတ်သည် wear ခံနိုင်စွမ်း၊ flexural strength နှင့် peel strength ကိုတိုးတက်စေသည်။...
ကျောက်မီးသွေးသုံးဓာတ်ငွေ့အပူစွမ်းအင်စက်ရုံမှဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းစနစ်အတွက် PPS အထည်စစ်ထုတ်အိတ်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်စက်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၈ ကြိမ်မြောက်ဘ ၀ ၀.၂၂ မိုက်ခရွန်စီစစ်ထားသောအိတ်များကိုရေတိုင်ကီထဲတွင်ထည့်ထားသည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PPS + PTFE ပေါင်းစပ်မြင့်မားသောအပူချိန်စစ်ထုတ်အိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale အိတ် Dusting from China, Need to find cheap အိတ် Dusting as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on အိတ် Dusting produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our အိတ် Dusting, We'll reply you in fastest.